समाचार गलत लेखेपछि पत्रकारले खाए आफ्नै पत्रिका ! « Lokpath
२०७७, २५ पुष शनिवार ११:१३
समाचार गलत लेखेपछि पत्रकारले खाए आफ्नै पत्रिका !
प्रकाशित मिति : २०७७, २५ पुष शनिवार ११:१३
काठमाडौं । स्थानीय एक खेलकुद टोलीका विषयमा आफूले पत्रिकामा लेखेको समाचार गलत साबित भएपछि एकजना पत्रकारले पत्रिका नै चपाएर खाएका छन् ।
घटना बेलारुसको हो । त्यहाँको एक चर्चित खेल पत्रिका प्रेसबलका पत्रकार भेचेस्लाभ फेडोरेन्कोभले कन्टिनेन्टल हकी लिग खेलमा डाइनामो मिन्स्क क्लब प्लेअफ चरणमा पुग्न नसक्ने भनी पत्रिकामा लेखेका थिए । तर उनको उक्त भविष्यवाणी गलत ठहरिएपछि उनले आफ्नो बाचा पूरा गर्दै आफूले पत्रिकामा लेखेर गरेको गल्ती स्विकार गर्दै आफ्नै अक्षरहरु खाए । अर्थात् आफ्नो गलत समाचार छापिएको पत्रिका उनले चपाएर खाए ।
उनी मिन्स्क एरिनाको प्रेस सेन्टरमा आए एउटा पत्रिका लिएर । उनले एउटा कपमा सुप पनि ल्याएका थिए । त्यसपछि उनले पत्रिका च्यात्दै सुपसँग चपाउँदै खाँदै गरे । सुप सकिँदासम्म उनले उक्त पत्रिकाको आधा भाग खाइसकेका थिए ।
आफ्नो विषयमा गलत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई त्यसरी पत्रिका नै खानका लागि डाइनामो मिन्स्क क्लबले कुनै दबाब दिएको थिएन । तर पत्रकारले आफ्नो गलत समाचारप्रति माफी माग्दै आफै पत्रिका नै खाएपछि क्लबका प्रशिक्षक पनि मख्ख नपर्ने कुरै भएन ।
उनले पूरै पत्रिका खान भने सकेनन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफ्नो मनपर्ने टोलीका लागि आफू जे पनि गर्न तयार रहेको बताए । तर यस्तो बाचा गर्नुपुर्व भविष्यमा दुईपटक सोँच्ने उनले बताएका छन् ।
श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर यी महिलाले सौतेनी छोरासँग गरिन् विवाह
काठमाडौं । सोसल मिडियामा हरेक दिन अनौठा खबरहरु भाइरल बनिरहेका हुन्छन् । यस्तै
खतरनाक स्टन्ट : खुट्टा नटेकी १४० मिटर अग्लो बिल्डिङमा साइकिल लिएर चढे यी मानिस (भिडियो)
काठमाडौं । हरेक दिन सोसल मिडियामा कुनै न कुनै भिडियो भाइरल बनिरहेका हुन्छन्
हात्तीले खुट्टाले गरिदियो मसाज (भिडियो)
काठमाडौं । सोसल मिडियामा हरेक दिन कुनै न कुनै भिडियो भाइरल बनिरहेका हुन्छन्
यी हुन् १९ वर्षकी संसारकै राम्री युवती, ३६ वर्षका अर्बपतिसँग गरिरहेकी छन् डेट !
काठमाडौं । १९ वर्षकी मोडल येल शेल्बियाले टीसी क्यालेन्डरको वार्षिक लिस्टमा १०० सबैभन्दा
खतरनाक स्टन्ट : खुट्टा नटेकी १४० मिटर अग्लो बिल्डिङमा साइकिल…
सपनामा बाख्रा देखे के हुन्छ ?
१० जना महिलासँग विवाह गर्दा पनि भएन सन्तान,
देवर भाउजू मृत्यु प्रकरण : भाउजूले खानलाई दिएकी
नेकपा दुवै पक्षको दाबी आयोगले नमान्‍ने, औपचारिक रुपमा
ओलीले लगाए कर्मचारीमाथि कर्के नजर, सरुवाको धम्की